မွေးနေ့ဆို ဒဏ်ရာရပြန်ပြီလား နေမာ??? – Sports A2Z
မွေးနေ့ဆို ဒဏ်ရာရပြန်ပြီလား နေမာ???
လာမည့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ၂၈နှစ်ပြည့်မယ့် ဘရာဇီးလ် စတားနေမာကတော့ မနက်ဖြန်မနက်မှာ ပြင်သစ်လီဂူးပွဲစဉ်အဖြစ် နွန့်စ်အသင်းနဲ့ ကစားရမယ့် ပွဲစဉ်အတွက် နံရိုးမှာ ဒဏ်ရာရနေတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ လွဲချော်ဖွယ်ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။
မွေးနေ့နီးတိုင်း အမြဲဒဏ်ရာရတတ်တယ်လို့ နာမည်ကြီးတတ်တဲ့ နေမာဟာ မွေးနေ့ပါတီတွေကို ပဲရစ်မြို့ကလပ်တွေမှာ ဖောဖောသီသီနဲ့ တကယ့်အကောင်းစား ပါတီကြီးတွေ ဖန်တီးခဲ့တဲ့ အစဉ်အလာလည်းရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ တကယ့်ဒိတ်ဒိတ်ကြဲတွေချည်းပဲ တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့အထိ နာမည်ကြီးပါတီတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
အသင်းဖော်တွေဖြစ်တဲ့ အာဂျင်တီးနားတောင်ပံကစားသမား ဒီမာရီယာ၊ ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှူး ကာဗာနီ၊ ကွင်းလယ်ကစားသမား မာကို ဗာရက်တီတို့ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့ မွေးနေ့အပြီး နှစ်ရက်အကြာမှာ နံရိုး ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အသင်းလူစာရင်းမှာ နေမာ ပါမလာနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေ ထွက်လာခဲ့တာတော့ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဖြစ်နေကျ မဟာအစဉ်အလာကောင်းကြီးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနေတာလားလို့ သံသယရှိစရာလည်း ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ မွေးနေ့နီးရင် ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ သိရှိထားရသလို ၂၀၁၉ခုနှစ်မှာလည်း မွေးနေ့နဲ့ နီးကပ်လာတဲ့အခါမှာ ဒဏ်ရာရတယ်ဆိုပြီး အသင်းကန်မယ့်ပွဲစဉ်တွေမှာ အကြိမ်ကြိမ် လွဲချော်ခဲ့ဖူးတာပါ။
၂၀၁၉ခုနှစ်မှာ Red Bullက Sponsor ပေးထားခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ပါတီကို လူ ၅၀၀ နီးပါး တက်ရောက်ခဲ့ကြအထိ ခြိမ့်ခြိမ့်သဲ ကျင်းပခဲ့ကြဖူးသလို ၂၀၁၈ခုနှစ်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ မွေးနေ့ပါတီပွဲမှာ ဖော်မြူလာဝမ်းကားမောင်းသမား လူးဝစ် ဟာမီလ်တန်နဲ့ ဘရာဇီးလ်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌအထိ တက်ရောက်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတဲ့အထိ စည်ကားခဲ့ဖူးပြီး မီဒီယာတွေကြားမှာ ဟိုးဟိုးကျော် နာမည်ကြီးခဲ့ဖူးတယ်လို့လည်း သိရှိရပါတယ်။
UNICODE: လာမညျ့ ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ ၂၈နှဈပွညျ့မယျ့ ဘရာဇီးလျ စတားနမောကတော့ မနကျဖွနျမနကျမှာ ပွငျသဈလီဂူးပှဲစဉျအဖွဈ နှနျ့ဈအသငျးနဲ့ ကစားရမယျ့ ပှဲစဉျအတှကျ နံရိုးမှာ ဒဏျရာရနတေယျဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ လှဲခြျောဖှယျရှိနတေယျလို့သိရပါတယျ။
မှေးနနေီ့းတိုငျး အမွဲဒဏျရာရတတျတယျလို့ နာမညျကွီးတတျတဲ့ နမောဟာ မှေးနပေ့ါတီတှကေို ပဲရဈမွို့ကလပျတှမှော ဖောဖောသီသီနဲ့ တကယျ့အကောငျးစား ပါတီကွီးတှေ ဖနျတီးခဲ့တဲ့ အစဉျအလာလညျးရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ တကယျ့ဒိတျဒိတျကွဲတှခေညျြးပဲ တကျရောကျခဲ့ကွတဲ့အထိ နာမညျကွီးပါတီတှဖွေဈခဲ့တာကိုလညျး တှခေဲ့ရပါတယျ။
အသငျးဖျောတှဖွေဈတဲ့ အာဂငျြတီးနားတောငျပံကစားသမား ဒီမာရီယာ၊ ဥရုဂှေးတိုကျစဈမှူး ကာဗာနီ၊ ကှငျးလယျကစားသမား မာကို ဗာရကျတီတို့ ပါဝငျဆငျနှဲခဲ့ကွတဲ့ မှေးနအေ့ပွီး နှဈရကျအကွာမှာ နံရိုး ဒဏျရာရတယျဆိုတဲ့ အကွောငျးပွခကျြနဲ့ အသငျးလူစာရငျးမှာ နမော ပါမလာနိုငျဘူးဆိုတဲ့ သတငျးတှေ ထှကျလာခဲ့တာတော့ နှဈစဉျနှဈတိုငျးဖွဈနကြေ မဟာအစဉျအလာကောငျးကွီးကို ဆကျလကျထိနျးသိမျးနတောလားလို့ သံသယရှိစရာလညျး ဖွဈနခေဲ့ပါတယျ။
သူဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈမှာ မှေးနနေီ့းရငျ ဒဏျရာရခဲ့တယျလို့ သိရှိထားရသလို ၂၀၁၉ခုနှဈမှာလညျး မှေးနနေဲ့ နီးကပျလာတဲ့အခါမှာ ဒဏျရာရတယျဆိုပွီး အသငျးကနျမယျ့ပှဲစဉျတှမှော အကွိမျကွိမျ လှဲခြျောခဲ့ဖူးတာပါ။
၂၀၁၉ခုနှဈမှာ Red Bullက Sponsor ပေးထားခဲ့တဲ့ မှေးနပေ့ါတီကို လူ ၅၀၀ နီးပါး တကျရောကျခဲ့ကွအထိ ခွိမျ့ခွိမျ့သဲ ကငျြးပခဲ့ကွဖူးသလို ၂၀၁၈ခုနှဈက ကငျြးပခဲ့တဲ့ မှေးနပေ့ါတီပှဲမှာ ဖျောမွူလာဝမျးကားမောငျးသမား လူးဝဈ ဟာမီလျတနျနဲ့ ဘရာဇီးလျဘောလုံးအဖှဲ့ခြုပျဥက်ကဋ်ဌအထိ တကျရောကျဆငျနှဲခဲ့ကွတဲ့အထိ စညျကားခဲ့ဖူးပွီး မီဒီယာတှကွေားမှာ ဟိုးဟိုးကြျော နာမညျကွီးခဲ့ဖူးတယျလို့လညျး သိရှိရပါတယျ။
နေမာကို တစ်ပတ်လုပ်ခ ပေါင် ၆ သိန်း ပေးတော့မယ်လို့ သတင်းထွက်လာ
လာမယျ့ရာသီ ယူနိုကျတကျကို နညျးပွဖို့ သဘောတူခဲ့တဲ့...
၂၀၂၂ ခုနှဈအတှကျ မကျဆီရငျဆိုငျရမယျ့ ကွီးမားတဲ့...